ရေခဲသေတ္တာ - တိုင်းလူတစ်ဦး၏နေ့စဉ်အသက်တာ၌တစ်ဦးအစားထိုးလို့မရတဲ့အရာ, မိသားစုနီးပါးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး, အရာမရှိဘဲကုန်ကျစရိတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့ရက်ကိုအဘယ်သူမျှ။ ဒါပေမယ့်သင်အနည်းငယ်ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းကို အသုံးပြု. သင်ပင်တစ်ရေခဲသေတ္တာနှင့်သင့်မီးဖိုချောင်၏အမှန်တကယ်အလှဆင်စေနိုင်သည်ကိုသိခဲ့ဘူး!
ကြှနျုပျတို့သညျဤဆောင်းပါး၌သငျပေးကြောင်းအနည်းငယ်အကြံပေးချက်များနှင့်အတူ, သငျသညျ, သင့်ရေခဲသေတ္တာ၏အသွင်အပြင်အသွင်ပြောင်းကြောင့်ထူးခြားတဲ့အောင်သို့မဟုတ်ဟောင်းရေခဲသေတ္တာကိုအလှဆင်, သူ့ကိုအသစ်တစ်ခုကိုဘဝပေးကမ်းနိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာတာရှည်တစ်စုံတစ်ဦးကအံ့သြခြင်းနှင့်ထူးခြားသောဖြစ်စဲထားပြီးကတည်းကဤဆောင်းပါး၌ငါတို့သည်ရေခဲသေတ္တာပေါ်မှာ banal သံလိုက်အကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ရေခဲသေတ္တာ - သင့်စိတ်ကူးများများအတွက်ပတ္တူတစျမြိုး။ သင်, ပုံရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုအလှဆင်ပန်းကပ်အလှဆင်ခြင်း technique ကိုအလှဆင်သို့မဟုတ်ရိုးရိုးမှုန်ရေမွှားဆေးသုတ်၏သံဗူးကို အသုံးပြု. သင်၏အပုံစံမျိုးအနီရောင်သို့မဟုတ်အစိမ်းရောင်ပိုမိုသင့်လျော်သောပုမှိုင်းအဖြူအရောင်များ၏ repaint နိုင်ပါတယ်။
သငျသညျပြင်ပပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရှိပါတယ်ထားတဲ့အပေါ်သူတို့၏ကိုယ်လက်နှင့်ကိုယ်အဟောင်းရေခဲသေတ္တာကိုအလှဆင်ဖို့ဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားနေကြသည်, ဒါမှမဟုတ်သူကပဲအသေအချာပြင်ဆင်ထားတဲ့ကြည့်လျှင်, ငါတို့သည်သင်တို့သည်သူ၏ပန်းကပ်အလှဆင်ခြင်း technique ကိုထုတ်ယူကြောင်းအကြံပြုပါသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့သင်တစ်ဦးလှပသောပုံစံ, PVA ကော်နှင့် acrylic ဆေးသုတ်နှင့်အတူသာလေးသိပ်သည်းတစ်ရှူးလိုအပ်ပါတယ်။ ဂရုတစိုက်ပုံဆွဲ, အဖြူရောင်အခြေစိုက်စခန်းစက္ကူလက်သုတ်ပုဝါကတဆင့်ခြိုးဖောကျဘဲ, သီးခြား, လက်သုတ်ပုဝါရုပ်ပုံများသို့မဟုတ်ပုံစံများကနေခုတ်ဖြတ်။ အရောင်ငါးပိအဘယ်သူမျှမတွန့်သို့မဟုတ်မူမမှန်ရှိကြ၏သေချာအောင်သတိထားပြီးတစ်ဦးရေခဲသေတ္တာမျက်နှာပြင်မှတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ acrylic အရောင်တင်ဆီနှစ်ခုမှသုံးအင်္ကျီအားဖြင့်ရရှိလာတဲ့ပုံနှင့်အတူထိပ်တန်းအဖုံး။ ဒါဟာလက်သုတ်ပုဝါကိုမသာအသုံးပွုနိုငျသျောလညျးသငျနှငျ့အတူတစ်သျှူးစက္ကူပုံစံကြိုက်တယ်။ ပန်းကပ်အလှဆင်ခြင်း၏အကူအညီနှင့်အတူ, သင်သည်မည်သည့်အတွင်းပိုင်းမှသင့်လျော်သောရေခဲသေတ္တာတစ်မူထူးခြားတဲ့ဒီဇိုင်းဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ်နည်းလမ်းဟောင်းကိုရေခဲသေတ္တာပုံစံမျိုးမိမိတို့လက်ကရန်ဗီနိုင်းရုပ်ရှင်အပေါ်ပုံစံကပ်နေသည်။ ဗီနိုင်း - သင်ကိုယ်သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပုံ paste, အဲဒီနောက်ရေခဲသေတ္တာ၏စေးကပ်ခြမ်းပေါ်မှာထားနိုင်သည့်တစ်ဦး Self-ကော်ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကိုလည်းကျွမ်းကျင်သူများထံမှကိန်းဂဏန်းများနှင့်အတူကြိမ်ဒဏ်အမိန့်သို့မဟုတ်အဆင်သင့်လုပ်အတွင်းပိုင်းစတစ်ကာများကိုဝယ်လို့ရပါတယ်။ ဒါကရေခဲသေတ္တာကိုအလှဆင်ဖို့မျှမျှတတလွယ်ကူသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, အရေးအကြီးဆုံးကတော့, အဗီနိုင်းရုပ်ရှင်ရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအရေးအကြောင်းတွေသို့မဟုတ်လေထုပူဖောင်းကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းမရှိပါကြောင်းသေချာပါစေ။
သင်တို့သည်လည်းသံလိုက်ပျဉ်ပြားနှင့်သင်၏ရေခဲသေတ္တာကိုအလှဆင်နိုင်ပါတယ်။ ရေခဲသေတ္တာပေါ်မှာသံလိုက်ဘုတ်အဖွဲ့ - ကလုံးဝသင့်လျော်မည်သည့်မီးဖိုချောင်, ဒါပေမယ့်လည်းနံနက်ယံ၌သူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့်၎င်းတို့၏ချစ်ရသူများအတွက်စိတ်ဓါတ်များ communicate နှင့်တင်ထားရန်အခွင့်အလမ်းကအလှဆင်ဖို့တစ်ခုသာကြီးမြတ်လမ်းမဟုတ်ပါဘူး။ $ 20- $ 40 ပျမ်းမျှပေမယ့်လက်ဖြင့်လည်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ် - သံလိုက်ဘုတ်အဖွဲ့အတော်လေးစျေးသိပ်မကြီးတဲ့ဖြစ်ပါသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ကိုသင် MDF နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအဆင်းအရောင်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုအထူးသံလိုက်မှင်တစ်စာရွက်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ "ကြော်" ရိုးရှင်း - သံလိုက်ဘုတ်အဖွဲ့လိုအပ်သောအရွယ်အစားအဘို့အ MDF အခြေခံ၏စာရွက်ဖြတ်အနားကိုင်တွယ်, သံလိုက်ဆေးသုတ်ကအများအပြားအလွှာလျှောက်ထားကြောင့်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ခန်းခြောက်ပါစေ။ ဤအပျဉ်ပြားတွင်, သငျသညျညဦးတိုင်အောင်နံနက် မှစ. အပြုသဘောနှင့်အတူသူတို့ကိုအားသွင်း, သူတို့ရဲ့ချစ်ရသူမှသတိပေးချက်များနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများဆွဲရေးနိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးရေခဲသေတ္တာဆေးမှုတ် decorating ၏နောက်ဆုံးနှင့်စျေးအကြီးဆုံးနည်းလမ်း။ ဒါဟာလှပသောစတိုင်, ထူးခြားတဲ့ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်သာအနုပညာရှင်တစ်ဦးကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတကယ်န့်အသတ်အခွင့်အလမ်းများကို၏နံပါတ် - သင်သည်မည်သည့်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အေးပုံတူဆွဲသွင်းထားနိုင် - နံရံဆေးရေးပန်းချီကားများထံမှ Leonardo da Vinci အားဖြင့်ပေါ်ပြူလာမှမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းပြည်ထောင်စုဂျက် (ဗြိတိန်အလံ), သို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်ထုတ်။
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, ရေခဲသေတ္တာပုံစံမျိုးမှနည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်, ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုအနည်းငယ်အကြောင်းအရာကိုသင်တို့ကိုပြောသည်။ ဖန်တီးမှု, စမ်းသပ်မှု Be နှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်စတိုင်နှင့်ရေခဲသေတ္တာအပေါင်းတို့နှင့်ဟင်းလျာများ၏ဒီဇိုင်းကိုဖန်တီးပါ။
အသက်တာ၏ 99 ကြိမ်မြောက်တစ်နှစ်ကွယ်လွန်သွားတွင်, ဂျော့ခ်ျ Gain - "ရဲတပ်ဖွဲ့အကယ်ဒမီ" မှပါမောက္ခချုပ် Lassard
ဆားဗီးယနျးတင်းနစ်ကစားသမားအတွက် Novak ဂျိုကိုဗစ်ကသမီးခဲ့
Ladies '' စားပွဲပေါ်မှာ
အဘယ်အရာကိုယောက်ျား Virgos နဲ့တူအမျိုးသမီးတွေ?
အမြားအဖြစ်လာကြပြီ 19 ကျပန်းတောက်ပတီထွင်မှု
ဆွေးနွေးချက်တွေလျှို့ဝှက်ချက်မင်္ဂလာဆောင်ဂျနီဖာနဲ့ Justin Theroux - ဆက်လက်!
မင်းသားဟယ်ရီနှင့်သူ၏သတို့သမီးကို Meghan Markle နှင့်အတူပထမဦးဆုံးအရာရှိတဦးကအင်တာဗျူး